News Collection: कता हराइन् नन्दिता ?
कता हराइन् नन्दिता ?
नेपाली सिनेमाहरु निर्माणको क्रम केहि कम भएपछि कलाकारहरु पनि फुर्सदिला वन्न थालेका छन् । कलाकाहरु फुर्सदिला वनेपछि कोही विदेशतिर हानीए भने कोही महोत्सवमाहरुमा पुगेर पैसा कमाउन ब्यस्त छन् । यस्तै पछिल्लो समय नायिका नन्दिता के.सीको चहलपहल ह्वात्तै घटेको छ । नेपाली सिनेमा भित्र चलेकी नायिकाको रुपमा परिचित नन्दिता अहिले फुर्सदिली वनेकी छिन् ।
नायिका के.सी प्राय सार्वजनिक कार्यक्रममा पनि देखिएको पाईदैन । लामो समयदेखि सिनेमा सम्वन्धी कार्यक्रममा नदेखिएकी नन्दिता आखिर कता छिन् त ? नायिका के.सी आफु नेपालमै रहेको वताउछिन् । उनले भनिन्, ‘अहिले खासै केही काम छैन ।’ सिनेमा सम्वन्धि कार्यक्रममा समेत नदेखिएकी नन्दिताले आफु काम भए मात्र वाहीर निस्कने वताइन् ।
कतिपय सिनेकर्मीहरु नायिका के.सी सिनेमा क्षेत्रवाट विस्तारै हराउन थालेको आभाष भएको बताउँछन् । उनले अभिनय गरेको चलचित्र ‘मृगतृष्णा’ प्रदर्शनको क्रममा रहेको छ । तर, उनको यो सिनेमाका लागि खासै दौडधुप देखिएको छैन नायिका के.सी किन यति धेरै दिक्क वनेकी हुन् सिनेमा क्षेत्रवाट यो भने वुझ्न सकिएको छैन ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा नदेखिएपछि कलाकारहरु हराएको आभाष गर्न हुन्छ । यो भिडमा नन्दिता पनि परेकी छिन् । आशा गरांै, नायिका के.सी दिकदारीको राज चाडै नै खोलीनेछ । कतै विहे त गर्न लाग्नु भएन भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भनिन्, ‘अहिले नै वेला भएको छैन ।’ नायिका अनुष्का ढकाल पनि विहे गर्न लागेपछि सिनेमा क्षेत्रवाट सन्यास लिएर हिडेकी थिईन् । नन्दिताको विस्तारै सिनेमा क्षेत्रवाट टाढा वस्न थाल्नुको राज कतै यो त होईन ?